Mootummaan Itoophiyaa Shororkaa fi Seer-maleessummaa Maqaa Labsii Yeroo Muddamaatiin Raawwachaa Jiru Dhaabuu Qaba. – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooMootummaan Itoophiyaa Shororkaa fi Seer-maleessummaa Maqaa Labsii Yeroo Muddamaatiin Raawwachaa Jiru Dhaabuu Qaba.
Ibsa ABO, Sadaasa 22, 2021.
Labsii Yeroon Muddamaan Itoophiyaa ta’e jedhee ittiin gareewwan mormitoota siyaasaa mudduu fi uummata nagaa irratti yakka suukaneessaa raawwachuuf labse Addi Bilisummaa Oromoo gadi jabeessee balaaleffata. Kaayyoo ijoon Labsiiwwan Yeroo Muddamaa Mootummaa Itoophiyaa seer-maleessummaa babal’isuudhaan uummata nagaa irratti gochawwan suukaneessoo fi dararaa raawwachuudhaaf yaadameeti.
Haaluma kanaan wal fakkaatuun Labsiin Yeroo Muddamaa Sadaasa 2, 2021 labsames dararaa fi humna waraanaa fayyadamuudhaan caasaalee paartilee mormitootaa diiguu fi miseensotaa fi deggertoota paartilee mormitootaa irratti dararaa raawwachuudhaaf labsame. Kunis gocha uummata dabalanii miidhuu fi humnaan jilbeenfachiisuuf yaadamee kan raawwatamaa jiruudha. Addi Bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo xiyyeeffannoo ijoo Labsii Yeroo Muddamaa kanaa waan ta’aniif, jaarmiyaalee fi namoonni dhuunfaa walaba ta’aniifi ilaalcha paartii badhaadhinaa irraa adda ta’e qabanis barbaadeffamuuf xiyyeeffannoo kana jala jiru.
Labsiin Yeroo Muddamaa yeroo ammaa hojiirra oolee jiru labsii baay’ee hammaataa uummata irratti dararama suukaneessaa raawwachuuf diriire yoo ta’u, kanaanis ilaalcha siyaasaa lammiilee biyyattii ukkamsuu, dinagdee, safuu fi xiin-sammuudhaan laaffisuu dabalatee jireenya uummataa kallattii maraan mancaasuu irratti fuulleffatee jira. Qabiyyeen Labsii Yeroo Muddamaa yeroo ammaa labsamee jiruu miseensotaa fi deggertoota paartilee mormitootaa, akkasumas maatii isaanii daangaa seeraa tokko malee akka fedhanitti adamsuu fi dararuudha. Humnoonni hidhatanii jiru yeroo barbaadanitti mana nama kamiiyyuu seenuudhaan waan fedhan akka raawwataniif hayyama argatanii jiru.
Kunis daa’imman, dubartoota fi namoota dullooman dabalatee miseensota maatii haleeluu fi dararuu, qabeenya dhuunfaa saamuu, nama kamiyyuu humnaan to’achuudhaan gara adda waraanaatti erguu of keessaa qaba. Gochoota baay’ee suukaneessoo fi rifaasisoo loltoonni mootummaa Abiyyi Ahmad raawwatan keessaa Mana haadha/harmee Hayyu-Duree Adda Bilisummaa Oromoo, Jaal Daawud Ibsaa ona dhaloota isaanii Oromiyaa Lixaa, Godina Horroo Guduruu, Abuunaatti argamu gubuun isa tokkoodha. Gareen maqaadhaaf biyya bulchina ofiin jedhan waanuma manichi bakka Jaal Daawud Ibsaa itti dhalatanii guddatan waan ta’ee qofaaf gocha seeraa fi safuun alaa akkanaa raawwachuun isaanii waan baay’ee nama qaanfachiisuudha.
Dabalataanis humnoonni mootummaa siidaa awaalchaa harmee Jaal Daawud Ibsaa yeroo dhihoo duutee diiguudhaaf yaalii gochaa turan. Gareen biyya bulchaa jiru humna waraanaa fayyadamuudhaan uummata jilbeenfachiisuuf yaaluun isaa gocha gadi bu’aa fi saalfachiisaadha. Haaluma wal fakkaatuun loltoonni Abiyyi Ahmad mana jireenyaa maatii hidhamaa siyaasaa ABO obbo Daawwit Abdataa weeraranii jiru. Jaal Daawwit Abdataa yeroo sadii ajaja mana murtiin hidhaarraa akka gadhiifamu ajajame kan ture yoo tahe iyyuu, sababa murtii seeraan alaa Abiyyiitiin haga ammaatti mana keessatti dararamaa jira. Aanaa Maqii keessa kan jiraatan miseensota maatii Jaal Daawwit mara hidhuudhaan maatii guutuu miidhaa jiru.
Yeroo ammaa kanas miseensotaa fi deggertoota ABO mana hidhaan turan yakka tokkollee osoo hin raawwatin waan isaan miseensaa fi deggertoota ABO ta’an qofaaf adamsanii hidhaatti guuraa akka jiran taajjabnee jirra. Haala Kanaan tibbana qabamanii kan hidhaman Obbo Masfiin Ittaanaa, Dachaasaa Wiirtuu, Biqilaa Abbaa Shoomaa fi kanneen biroon fakkeenya ta’u. Akkasumas hojjettoonni ABO fi maatiin isaanii kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti qabamanii hidhaatti guuramaa jiru.
Kun kanaan osoo jiruu, waanti baay’ee suukaneessaa fi yaaddessaan ammoo hidhamtoota mana hidhaa keessaa baasuudhaan uummata fuulduratti ajjeesuudha. Humni hidhatan Abiyyii Ahmadiin bobbaafaman namoota mana hidhaa keessaa baasuudhaan ajjeesanii reeffa isaanii bosonatti gataa jiru. Kanas yeroo dheeraaf irraa deddebi’anii raawwachaa jiru. Akkuma kanaanis Giddugaleessa Oromiyaa, Salaaleetti tibbana jaarsa umuriin waggaa 60 ta’e mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesanii jiru. Haala ajjeechaa Oromiyaa keessatti hidhamtoota irratti raawwatamaa jiruu ibsuun baay’ee ulfaataafi yaaddessaadha. Hidhamtoota mana hidhaa keessaa baasuudhaan ajjeesanii reeffa isaanii gatuun bartee loltoota Abiyyiin hidhachiisee bobbaasee ta’ee jira.
Gocha gara jabeenyaa kanaan lubbuu namoota qulqulluu qofatu manca’aa jira osoo hin taane, miseensonni maatii isaaniis qalbii fi sammuun isaan madaa’ee jira. Haala tokko tokko keessatti ammoo maatiin reeffa nama isaanii ajjeeffamee awwaallachuuf carraa hin argatan. Miseensonni maatii wayita reeffi nama isaanii bineensaan nyaatamu arguun godaannisa sammuu baay’ee ulfaataadha.
Dabalataanis, maqaa Labsii Yeroo Muddamaatiin Oromiyaa keessatti, addatti ammoo Finfinnee keessatti uummata nagaa adamsuu fi qabeenya isaanii saamuun daran hammaatee jira. Kanaanis yeroo kamitti iyyuu mana nama dhuunfaa seenuudhaan sakatta’aa fi qabeenya dhuunfaa fudhachaa jiru, akkasumas namoota daandii irratti dhaabuudhaan giiphii namootaa sakatta’uun maallaqa, qabeenya gati-qabeessaa fi waan argatan mara saamaa jiru.
Walumaagala, Labsiin Yeroo Muddamaa tibbana labsame kaayyoo lama qaba: Tokkoffaan, miseensota, deggertaataa fi maatii paartilee siyaasaa dhabamsiisuudhaan sirna abbaa irree ilaalchaa fi dantaa garee tokkoon durfamu diriirsuudha. Lammaffaan qabeenya paartilee siyaasaa fi namoota dhuunfaa Paartii Badhaadhinaa mormanii saamuudhaan dadhabsiisuudha ufii jireenya isaanii fooyyeefachuudha.
1. Labsii Yeroo Muddamaa seeraan ala labsamee fi gocha kanaan wal qabatee humnoonni Abbiyiin hidhachiisee bobbaase raawwachaa jiran kan balaaleffannu yoo ta’u, mootummaa fi humnoonni mootummaa uummata Oromoo fi Uummata Itoophiyaa irratti raawwachaa jiran akka dhaaban gadi-jabeessinee akeekkachiisna.
2. Uummanni Oromoo fi uummattoonni Itoophiyaa gocha mootummaan abbaa irree Abiyyii Ahmadiin durfamu maqaa Labsii Yeroo Muddamaatiin uummata nagaa humnaan jilbeeffachiisuuf dararaa jiru fuuldura dhaabatanii akka balaaleffatanii fi morman dhaamna. Kanaafis tokkummaan akka waliin dhaabattanii mormitan dhaamna.
3. Akkasumas uummattoonni Itoophiyaa golgaa Labsii Yeoo Muddamaa jedhamu jala dhokachuun haleellaa fi dararaa uummata nagaa irratti raawwachaa jiru akka balaaleffatan waamicha goona. Gareen aangoorra jiru golgaa Labsii Yeroo Muddamaa jedhamu kana fayyadamuun uummattoota biyyattii gidduutti wal shakkii fi wal qoodinsa hammeessuudhaan inumaa gara diigamsaatti oofaa jira. Kanarra ammoo, qaamolee fi qooda fudhattoota dhimmi ilaallatu mara hirmaachisuudhaan, wal tumsuun nagaa fi tasgabbii gabbisuun, filannoon haqaa akka geggeeffamuuf haala mijeessuun dharraa uummattoota Itoophiyaa bara dheeraa dhugoomsuutu fala ta’a.
4. Hawaasi idil-addunyaa rakkoo hamaan yeroo ammaa Impaayera Itoophiyaa mudatee jiru marii fi waliigaltee hunduma hirmaachiseen akka furamuuf tumsa isaan irraa eegamu akka godhan gaafanna. ABOn, dharraa fi gaaffiin uummataa marii karaa nagaa hunduma hirmaachiseen mirkanaa’uu qaba jedhee amana. Ummanni Oromoos gamanuma bartee fi duudhaa dimokiraasii dagaagfatee waan qabuuf, nagaa fi dimokiraasaan dhugaa qooda fudhattoonni dhimmi ilaallatu marti fedhii isaaniitiin walitti dhufanii yoo mari’atan qofa argama jedhee amana.
Sadaasa 22, 2021